Eshibhile Acrylic Camera fiberglass ifektri kanye nabaphakeli | UChengyang
I-Acrylic Camera fiberglass iyindwangu ekhethekile ye-weave fiberglass, efaka ingubo ehlukile ye-acrylic ezinhlangothini zombili. Indwangu yokugqoka esebenza kahle kakhulu ayimelana nomlilo, ngaphezu kokuthi yakhelwe ngokukhethekile ukumelana ne-slag, ukumelana nenhlansi, nokumelana nelangabi elenzekayo lokusika amathoshi. Isebenza kahle ezinhlelweni ezinjengokusetshenziswa kwamakhethini wokushisela mpo wokuvikela inhlansi, izithiyo ze-flash kanye nezihlangu zokushisa. Ingasetshenziselwa ukusetshenziswa kwezingubo zokuvikela ezifana nama-aprons namagilavu.Imibala ejwayelekile yokumbozwa kwe-acrylic ifaka phakathi okuphuzi, okuluhlaza okwesibhakabhaka nokumnyama. Imibala ekhethekile ingenziwa ngokuthengwa kobungako obuncane.
Intengo ye-FOB: USD 2-15 / sqm
Min.Order Ubuningi: 100 sqm
1. Isingeniso Somkhiqizo:
Indwangu ye-fiberglass + i-acrylic glue
Okuphinki, Okuphuzi, Okumnyama
Ingubo yokushisela umlilo, ikhethini lomusi womlilo, Enye inkambu yokushisa okuphezulu
iroli elilodwa eligcwele ifilimu le-PE, bese lipakishwa ku-Woven bag / Carton, futhi lafakwa ku-Pallet.
Langaphambilini Indwangu ye-Acrylic Fiberglass
Olandelayo: Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass
Q1: Ingabe ukuhweba inkampani noma nomkhiqizi?
Q2: Iyini intengo ethile?
I-A2: Intengo iyaxoxisana.Ingashintshwa ngokuya ngobuningi noma iphakethe lakho.
Lapho wenza uphenyo, sicela usazise ukuthi ungakanani nenombolo yemodeli oyithandayo.
Q3: Ingabe unikeza isampula?
I-A3: Amasampula amahhala kodwa aqoqwe imali ekhokhelwayo.
Q4: Siyini isikhathi sokulethwa?
I-A4: Ngokuya ngobuningi be-oda, izinsuku ezi-3-10 ezijwayelekile ngemuva kokufakwa kwediphozi.
I-A5: Ngokomkhiqizo lokho okuthandayo. Imvamisa 100 sqm.
Q6: Yimiphi imigomo yokukhokha oyamukelayo?
I-A6: (1) 30% kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ngaphambi kokulayisha (imigomo ye-FOB)
(2) 30% kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ngokuqhathaniswa nekhophi B / L (imigomo ye-CFR)
0.8mm Indwangu ye-fiberglass
Acrylic Camera fiberglass, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass, Indwangu i-fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized, Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu, Indwangu ye-Acrylic fiberglass,